OpenProject: New Version 11.3.1 an'ny Project Management Software | Avy amin'ny Linux
OpenProject: New Version 11.3.1 an'ny Project Management Software
Linux Post Install | 10/06/2021 06:00 | fampiharana, About us
Hatramin'izay, vao andro vitsy lasa izay kinova vaovao an'ny fanta-daza Rindrambaiko fitantanana tetikasa (SGP) de Loharano misokatra antsoina hoe "OpenProject"Androany izahay dia hanokana ity lahatsoratra ity amin'ny fahalalana ny tena ilaina momba azy.
Tsara ny manamarika izany SGP ankehitriny dia izy ireo fitaovana dizitaly ampahany ilaina amin'ny fiainana andavanandron'ny maro amin'ny karazany maro orinasa sy fikambanana, amin'ny maha matihanina amin'ny sehatra samihafa. Noho izany, ny SGP dia heverina imbetsaka, a tombony stratejika ho an'ireo orinasa sy fikambanana manavao toy izany.
Tsy vao voalohany no naneho hevitra momba ny a SGP ao amin'ny Blog, fa raha vao voalohany "OpenProject". SGP iray hafa efa noresahintsika no nantsoina "ProjectLibre". Izay nofariparitanay tamin'io fotoana io:
"Raha iray amin'ireo olona mila mitantana ny tetikasany ianao, na injeniera ianao na mpampiasa tsotra, ary mampiasa Microsoft Project ho an'ity ianao, dia manome vaovao tsara ho anao aho: efa manana safidy hafa maimaimpoana antsoina hoe ProjectLibre ary tsy maimaim-poana izany. Araka ny voalazan'ny mpamorona azy, ny hevitra voalohany dia ny handefa solon'izay Microsoft Project Server antsoina hoe ProjectLibre Project Server, saingy fantatr'izy ireo fa tsy maintsy nanolotra fitaovana ho an'ny birao izy ireo ary avy eo ny kinova ho an'ny mpizara." ProjectLibre: Ny solon'ny Microsoft Project
ny hafa SGP na misy (solony) misy Loharano misokatra, F'inona izy ireo maimaim-poana na "freemium" Ireto dia: Asana, ClickUp, Kanboard, Basecamp, Notion, Quire, Redmine, Taiga, Trello ary Wrike, ankoatry ny maro hafa.
1 OpenProject: lozisialy Open Source Project Management
1.1 Inona ny OpenProject?
1.3 Inona no vaovao amin'ny kinova 11.3.1
1.4 Misintona, mametraka, mampiasa
OpenProject: lozisialy Open Source Project Management
Inona ny OpenProject?
Araka ny anao tranokala ofisialy, "OpenProject" Toy izao manaraka izao no ilazana azy:
"Izy io dia lozisialy misokatra Project Management Software, noforonina mba hanolorana fitantanana mahomby ny tetikasa klasika, mailaka na hybrid amin'ny tontolo azo antoka."
Mandritra, ao amin'ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, dia faritana fohifohy toy izao:
"Rindrambaiko fitantanana tetik'asa miorina amin'ny tranonkala."
"OpenProject" Izy io dia manolotra sehatrasa maro karazana, toy ny: fitantanana tetikasa marobe, fiaraha-miasa (fiaraha-miasa), ary fifandraisana mahomby mandritra ny androm-piainan'ny tetikasa tantana.
Ho fanampin'izany, manolotra fanohanana amin'ny fitantanana asa, ny fanarahan-dia ny bug, ny fitantanana ny takiana, ny fandrindrana ny vokatra, ny fitantanana fivoriana, ny fanarahana ny fotoana ary ny fitaterana ny vidiny, ny fitantanana ny teti-bola, ankoatry ny maro hafa.
Ary tonga amin'ny endrika maro, fanontana vondrom-piarahamonina maimaim-poana, fanontana rahona ary fanontana orinasa. Io dia ahafahana mametaka azy amin'ny fotodrafitrasa misy azy manokana, hananana fifehezana sy fananana feno 100% amin'ireo angona.
"OpenProject no fomba mora indrindra ahafahan'ny ekipa manara-maso ny asany, ary mahazo valiny. Fantatry ny rehetra ny tanjona ary miara-miasa amin'ny ekipa hahatratrarana azy. Ny fandaminana ny asantsika manokana sy ny fanomezana andraikitra ireo ekipa hafa dia tena mora. Amin'ny OpenProject dia manana ny asanao sy ny fifandraisanao amin'ny toerana iray ianao."
Inona no vaovao amin'ny kinova 11.3.1
Ny kinova vaovao azo eo ambanin'ny laharana 11.3.1 dia manana daty famoahana 08/06/2021. Ary misy fanamboarana bibikely isan-karazany izay azo zahana amin'ny manaraka rohy. Raha, ho fampahalalana misimisy kokoa momba ny vaovao isaky ny kinova ankehitriny sy taloha, ity manaraka ity dia azo zahana rohy.
Misintona, mametraka, mampiasa
Ho fampiharana azy dia azo apetraka mivantana saika amin'ny rehetra GNU / Distros Linux, Vía Mpitantana fonosana tompon-tany amin'ny terminal (console). Ary ho an'ny fampidinana sy fametrahana ny dikan-teny farany de Fanontana amin'ny fiarahamonina afaka mihazakazaka izao manaraka izao ianao fomba ofisialy voalaza eto manaraka rohy. Avy eo, farano amin'ny fanatanterahana "OpenProject" Amin'ny alàlan'ny Web browser tiana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fampiharana sy ny fampiasana azy dia azonao atao ny mizaha azy fizarana antontan-taratasy hatrany am-piandohana amin'ny manaraka rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny olom-pantatra Rindrambaiko fitantanana tetikasa (SGP) de Loharano misokatra antsoina hoe «OpenProject» sy ny kinova vaovao "11.3.1" navoaka vao tsy ela; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » OpenProject: New Version 11.3.1 an'ny Project Management Software
Mozilla, Google, Apple ary Microsoft dia manambatra hery hanara-penitra ny add-ons
Bitcoin dia efa ara-dalàna ao El Salvador ary lasa firenena voalohany nanaiky azy ho ara-dalàna